स्वादिष्ट र कोमल घर केक सधैं नातेदार र अतिथि प्रसन्न, र यो संगमरमर केक भने, त्यसपछि धेरै को लागि यो बाल्यकाल सँग सम्बन्धित छ। यो तयारी एकदम सरल छ, तर कट र सुखद चकलेट स्वाद, वयस्क र बच्चाहरु दुवै को धेरै रुचाउनु मा रोचक ढाँचा।
व्यञ्जनहरु को एक जसको लागि निम्न, यो मिठाई तयार छन्। Miscible पीठो (3 कप) एक disintegrant र नुन एक चिम्टी। एक र चीनी को आधा कप संग एक मिक्सर संग घिउ मिश्रण को 100 ग्राम। यो पनि3कच्चा अन्डा थप्न र आवश्यकता एक समयमा पिटाई जारी। बिस्तारै परिणाम मिश्रण दूध एक गिलास मा खन्याइन् र सुक्खा सामाग्री हालिएको थियो। आटा, राम्रो तरिकाले मिश्रित छ कुनै गांठ छोड्न र दुई आधा विभाजन गरिएको छ। तिनीहरूलाई को एक कोको पाउडर (पनि गर्न सक्छन् चकलेट सिरप) थपिएको छ। यस तयार, greased सामूहिक मात्रा मा आटा तहहरू एकान्तरण, हालिएको छ। यो एक घण्टा को लागि एक मध्यम तापमान मा सुखा छ। धुलो चिनी संग छर्कियो संगमरमर केक को शीर्ष मा, यो पनि चकलेट grated गर्न सकिन्छ। यो उत्पादन अनुपात लगभग 20 सर्विंग्स गणना। यसलाई अझ राम्रो एक बिट तल cooled सेवा गर्छन्।
तपाईं तयारी को निम्न विधि प्रयोग गरेर, संगमरमर केक बनाउन सक्छ।3कच्चा अन्डा पहेंलो भाग र सेतो विभाजित छन्। हाल फोमिंग सम्म चीनी को आधा कप मार। को yolks चीनी को नै रकम थपिएको हो, राम्रो मिश्रण। दुवै भागहरु हेरविचार संग जोडिएको छन्। यस तयार कचौरा मा पीठो, नरम मक्खन को नै राशि, अन्डा मिश्रण को कप बाहिर राखे। Blender वा मिक्सर आटा राख्नु, kneaded छ hydrated सोडा, कोको पाउडर संग मिश्रित छ एक जो दुई भागहरु, विभाजन गरिएको छ। एक buttered पकवान मा आटा, प्रकाश र अँध्यारो तहहरू राखे। संगमरमर केक 170 डिग्री मा 40 मिनेट सुखा। यो समयमा विशेष ओवन फरक हुन सक्छ। यो नुस्खा, breadmakers प्रयोग गर्न सकिँदैन wherein स्ट्याक को रूप मा आटा पछि (माथि वर्णन रूपमा) इच्छित मोड (सबै भन्दा सामान्यतः "सेक्ने", 50 मिनेट) राखिएको छ।
एक संगमरमर केक को नाम आटा खाना पकाउने दुई रंग मिश्रण को फलस्वरूप प्राप्त छ जो विचित्र आकृति, कारण थियो। ड्राई कोका तथापि, पग्लियो चकलेट परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो मामला स्वाद अलिकति परिवर्तन मा एक गाढा रंग दिनकै गर्न प्रयोग गरिन्छ।
गाढा दूध मा cupcakes गरे जो एकदम साधारण व्यञ्जनहरु।4अन्डा गाढा दूध जार, यहाँ पनि राखिएको भानलिन र disintegrant पाउच संग मिश्रित। परिणामस्वरूप ठूलो दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ती मध्ये नरम margarine (100 ग्राम) र पीठो (200 ग्राम) राख्नुभयो। पीठो अन्य नै रकम र पग्लियो गाढा चकलेट टाइल मा। दुई मिश्रण राम्रो तरिकाले मिश्रित थिए। , सुखा गरिने संगमरमर केक फारम, एकांतर गाढा र हल्का आटा बाहिर राखे। बारेमा एक घण्टा न्यूनतम तापमान मा पाकेका पकवान। यसलाई ग्लेज खन्याइदिएकी माथि। यो गर्न, पग्लियो मक्खन को 50 ग्राम, यो टाइल थपियो गाढा चकलेट को, दूध को चम्मच को एक जोडी र चीनी को नै राशि, उसिनेर र समाप्त केक पोखे।
निम्न नुस्खा पनि व्यापक प्रयोग भएको छ। Polpachki (100 ग्राम) मक्खन एक मलाईदार मार आम मा, यहाँ polstakana चीनी, भानलिन को चिम्टी थपियो। बिस्तारै4अन्डा मा संचालित, खट्टा क्रीम को2चमचा राखे। पीठो, sifted छ बेकिंग पाउडर को एक सानो राशि संग मिश्रित, सामाग्री बाँकी थप्नुहोस्। आटा अलिकति पानी जस्तो हुनुपर्छ। यसबाहेक, यो कोका राखिएको छ, एक को बराबर भागहरु, विभाजन गरिएको छ। आटा को आकार यो 180 डिग्री मा एक घण्टा ओवन राख्नु छ जो पछि, एकांतर बाहिर राखिएको छ। तयार संगमरमर केक एक समय को लागि तल शांत बाँकी छ, त्यसपछि यो ग्लेज खन्याउन सिफारिस गरिएको छ।
को मेयोनेज मा पाइ: मिठाईहरू को सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु। मेयोनेज मा मीठा केक
एक स्वादिष्ट "नेपोलियन" कस्टर्ड केक कसरी खाना पकाउनु?
कसरी पिताजी को लागि एक केक जस्तो हुनुपर्छ?
चरण पुस्तिका "हत्यारा जेफ कसरी आकर्षित गर्न"
"मलेशिया एयरलाइन्स": समीक्षा
चरण पाठ द्वारा चरण: शिक्षक र शिक्षक आकर्षित गर्न कसरी